ဒေါ်လာ ၉၄၀ သန်း အကုန်ခံပြီးမှ ဆက်မလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ လျှပ်စစ်ကား - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ဒေါ်လာ ၉၄၀ သန်း အကုန်ခံပြီးမှ ဆက်မလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ လျှပ်စစ်ကား
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော James Dyson က အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်
N526 အမည်ရှိ လျှပ်စစ်ကားကို ထုတ်လုပ်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ခေါ်ယူခြင်း မပြုဘဲ သူ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းလျှပ်စစ်ကား Tesla ကို ယှဉ်နိုင်မည်ဟု အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကားကို N526 ဟု ကုဒ်အမည် ပေးထားသည်။
James Dyson ဟာ ယူကေမှာ အချမ်းသားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်လို့ အသိအမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလျံကျော် ချမ်းသာတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
သူလုပ်ကိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ကား N526 ဟာ Tesla ကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့်ကားဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ နီးပါး စိုက်ထုတ်ပြီး အကုန်အကျခံ လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ပြောပြပါတယ်။
N526 electric SUV ဟာ ခုနစ်ယောက်စီး လျှပ်စစ်ကား EV (Electric Vehicle) ဖြစ်ပြီး အားအပြည့် တစ်ခါသွင်းပြီးရင် မိုင် ၆၀၀ အထိ မောင်းလို့ရတယ်။ ဒီတော့ Tesla ရဲ့ ကားတွေထက် သာတယ်။
Tesla Model S က အားအပြည့် တစ်ခါသွင်းပြီးရင် ခရီးတာ မိုင် ၃၈၀ အထိ မောင်းလို့ရပြီး Model X က အားအပြည့် တစ်ခါသွင်းပြီးရင် ၃၁၄ မိုင်အထိသာ မောင်းလို့ ရပါတယ်။
N526 electric SUV ရဲ့ အလေးချိန်က ၂ တန်ကျော် ရှိပြီး ကားအလျားက ၅ မီတာ ရှည်ပါတယ်။ အကျယ် ၂ မီတာ ရှိပြီး အမြင့် ၁ . ၇ မီတာ ရှိတယ်။
လမ်းသားနဲ့ ကားဗိုက်အမြင့်ကြား အကွာအဝေးကို နှစ်ပေ ဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်။ ဗိုက်မလွတ်လို့ မောင်းမရတဲ့လမ်းတွေကို ရှောင်မောင်းနေဖို့ မလိုဘူး။
150kWh lithium-ion ဘက်ထရီ သုံးထားတယ်။ အမြန်သွင်း quick charging လုပ်လို့ရတဲ့ ဆဲလ်တွေကို သုံးထားတယ်။
N526 electric SUV ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်းက တစ်နာရီ ၁၂၅ မိုင် ( တစ်နာရီ ၂၁၀ ကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပြီး သုညကနေ တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အမြန်နှုန်းကို ၄ . ၈ စက္ကန့်ဖြင့် ရောက်အောင် အရှိန်တင်ပေးတယ်။ 200kW ရှိတဲ့ လျှပ်စစ် မော်တာ ၂ လုံး တပ်ပေးထားပြီး ပါဝါ မြင်းကောင်ရေ ၅၃၆ bhp ထုတ်ပေးတယ်။
Dyson က ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ နီးပါး အကုန်ခံထားပြီးကာမှ ဘာလို့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအချက်က ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး အမြတ်ရဖို့ဆိုရင် ကားဈေးနှုန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းရှစ်သောင်း အထက်မှာ ဈေးဖွင့်ပြီး ရောင်းဖို့ လိုတယ်။
ရည်မှန်းထားတဲ့ ဈေးကွက်က တရုတ်ပြည်တွင်းဈေးကွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေအရ တရုတ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာ အခွန်မဆောင်ရသေး စက်ရုံထုတ်ဈေး EV တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းရှစ်သောင်း အထက်မှ ပေးဝယ်မယ့်သူက လက်ချိုးရေလို့ ရမယ်။
James Dyson ဟာ ယူေကမွာ အခ်မ္းသားဆုံး ပုဂၢိဳလ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။
သူလုပ္ကိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကား N526 ဟာ Tesla ကို ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ကားျဖစ္ၿပီး သူ႔ကိုယ္ပိုင္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ နီးပါး စိုက္ထုတ္ၿပီး အကုန္အက်ခံ လုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေျပာျပပါတယ္။
N526 electric SUV ဟာ ခုနစ္ေယာက္စီး လွ်ပ္စစ္ကား EV (Electric Vehicle) ျဖစ္ၿပီး အားအျပည့္ တစ္ခါသြင္းၿပီးရင္ မိုင္ ၆၀၀ အထိ ေမာင္းလို႔ရတယ္။ ဒီေတာ့ Tesla ရဲ႕ ကားေတြထက္ သာတယ္။
Tesla Model S က အားအျပည့္ တစ္ခါသြင္းၿပီးရင္ ခရီးတာ မိုင္ ၃၈၀ အထိ ေမာင္းလို႔ရၿပီး Model X က အားအျပည့္ တစ္ခါသြင္းၿပီးရင္ ၃၁၄ မိုင္အထိသာ ေမာင္းလို႔ ရပါတယ္။
N526 electric SUV ရဲ႕ အေလးခ်ိန္က ၂ တန္ေက်ာ္ ရွိၿပီး ကားအလ်ားက ၅ မီတာ ရွည္ပါတယ္။ အက်ယ္ ၂ မီတာ ရွိၿပီး အျမင့္ ၁ . ၇ မီတာ ရွိတယ္။
လမ္းသားနဲ႔ ကားဗိုက္အျမင့္ၾကား အကြာအေဝးကို ႏွစ္ေပ ျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားတယ္။ ဗိုက္မလြတ္လို႔ ေမာင္းမရတဲ့လမ္းေတြကို ေရွာင္ေမာင္းေနဖို႔ မလိုဘူး။
150kWh lithium-ion ဘက္ထရီ သုံးထားတယ္။ အျမန္သြင္း quick charging လုပ္လို႔ရတဲ့ ဆဲလ္ေတြကို သုံးထားတယ္။
N526 electric SUV ရဲ႕ အျမင့္ဆုံး အျမန္ႏႈန္းက တစ္နာရီ ၁၂၅ မိုင္ ( တစ္နာရီ ၂၁၀ ကီလိုမီတာ) ျဖစ္ၿပီး သုညကေန တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အျမန္ႏႈန္းကို ၄ . ၈ စကၠန႔္ျဖင့္ ေရာက္ေအာင္ အရွိန္တင္ေပးတယ္။ 200kW ရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာ ၂ လုံး တပ္ေပးထားၿပီး ပါဝါ ျမင္းေကာင္ေရ ၅၃၆ bhp ထုတ္ေပးတယ္။
Dyson က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ နီးပါး အကုန္ခံထားၿပီးကာမွ ဘာလို႔ ဆက္မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တာလဲဆိုတာကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္က ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၿပီး အျမတ္ရဖို႔ဆိုရင္ ကားေဈးႏႈန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း အထက္မွာ ေဈးဖြင့္ၿပီး ေရာင္းဖို႔ လိုတယ္။
ရည္မွန္းထားတဲ့ ေဈးကြက္က တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္ထဲမွာ အခြန္မေဆာင္ရေသး စက္႐ုံထုတ္ေဈး EV တစ္စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း အထက္မွ ေပးဝယ္မယ့္သူက လက္ခ်ိဳးေရလို႔ ရမယ္။